कुनै सम्पदाभन्दा कम छैन संविधान । यसरी नै मिचिँदै गए कुनै दिन खण्डहर होला । विवेकशील साझा पार्टीको बखुण्डोल मुख्यालयमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य दुई दिनअघि बोल्दै थिए, ‘विवेक बन्धकी राखेका लम्पट कार्यकर्ता हुँदासम्म न देश उँभो लाग्छ, न लोकतन्त्र नै ।’
दुर्भाग्य, आज देशमा मतदाता होइन, कार्यकर्ता छन् । कार्यकर्ता पनि 'मामुली' हाेइन, अन्धभक्त अनुचरहरू छन् । पेसाकर्मी होइन, पार्टीका सेना छन् । प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक नियुक्ति आस गर्नेहरू व्याप्त छन् । सत्ताको जुठो चाट्न पाएकोमा आफैँलाई धन्य ठान्नेहरू, नेताविशेषप्रति अनुगृहीत हुनेहरू स्वतन्त्र कर्म गरिरहेकाहरूलाई विदेशी दलाल करार गर्न कुन स्वाभिमानले साहस गर्दा हुन् ?
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भाँचेर हिँडिदिने उद्घोष गर्ने अरु कोही होइनन्, केपी ओली हुन् । तिनले प्रत्येक दिन नागरिकप्रति तथानाम बोल्दा तिनका अरिङ्गालहरू उत्तेजित हुँदै ताली बजाउँछन् । पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवीले यो देश बिगारेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।
अख्तियारले चलाउनुपर्ने मुद्दाहरूको फाइल सरकार आफैँले खोल्न लागेको भनी मन्त्रीले बोल्दा ती हुरुक्कै हुन्छन् । बुद्धिलाई घरैमा छाडेर आउँछन् कि के हो, तिनले आफू चेतनशील र जिम्मेवार नागरिक हुँ भन्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सन्छन् ।
जनताले आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्नुको साटो ‘यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु’ भन्दासम्म कुनै पनि देश उँभो लाग्दैन । उदार तानाशाह आएर देश बनाइदेला भन्ने कत्रो भ्रम ? हाम्रो अर्धज्ञान यति दयनीय हालतमा पुगिसकेछ कि कहिलेकाहीँ कविताको हरफले पनि शोषण गर्छ ।
यस अर्थमा जनता फेरि जाग्ने बेला आएको छ । कारण त थुप्रै छन् । ओलीको पुसतन्त्र त्यसको मुख्य कारक हो । प्रचण्ड, माधव या देउवाहरू कुनै महापुरुष थिएनन्, होइनन् पनि । तर, कुरा यहाँ व्यक्तिको होइन, विधिको हो । विधि रहे न व्यक्ति । नत्र सर्वत्र अधिनायकी ।
बालुवाटार । राजधानी काठमाडौंको यो मुख्य शक्तिकेन्द्रनजिक आज सोमबार दिउँसो संविधान र सम्पदाको मायामा नागरिक प्रदर्शन चल्यो । २०७२ को संविधान मिचेर राजनीतिक अपराध गर्ने ओली, अनि कमलपोखरीलगायत बहुमूल्य सांस्कृतिक सम्पदा मिच्दा चुइँक्क नबोल्ने शक्तिसीनहरूविरुद्ध सडकमा ओर्लिनेहरूमा मोहना अन्सारी, सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, श्रवण मुकारुङ थिए । त्यहाँ विमल अर्याल, श्याम श्रेष्ठ, युग पाठक, रघुजी पन्त, प्रकृति भट्टराईलगायत थिए । नाम अरु पनि लिन सकिन्छ । त्यहाँ नयाँ पुस्ताका अरु थुप्रै जोधाहा नागरिकहरू थिए । रैती बन्न अस्वीकार गर्ने सार्वभौम मस्तिष्कहरू ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, त्यसलाई एक किसिमले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मा बदल्न खोजियो भन्न मिल्छ । किनकि वास्तविक प्रम कार्यालय सिंहदरबार नौ महिनादेखि गएका छैनन्, ओली । स्वास्थ्य र सुरक्षा कारण देखाउँदै धुम्बाराहीको पार्टी मुख्यालयसमेत जान अनकनाउने उनी अहिले आफ्नो कार्यालयबाहेक सबैतिर पुगिरहेका छन् ।
ओलीसँग कुनै गुनासो छैन । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले यो लेखकसँग फोनमा कुरा गर्दै ‘मिसनमा लागेको’ आरोप लगाए । उनले चारवटा मिडियाको नाम लिँदै त्यसलाई आफूहरूले ‘नोट गरेको’ चेतावनी दिए । मैले भनेको थिएँ, ‘मिसन गर्न हामीलाई आवश्यक छैन कमरेड । तर, मिसन ठान्नुहुन्छ भने पनि ५ पुसपछि त हामी संविधान रक्षाको मिसनमै छौँ । सिस्टम जाेगिए मात्र हाम्राे पेसागत स्वतन्त्रता जाेगिन्छ । यसमा लुकाउनुपर्ने के छ र ?’
टेलिफाेनका दुई सेटमा निरुद्देश्य झुण्डिरहेका हामीबीच केही बेर बेकारकाे तर्कवितर्क चल्यो । त्यो सहजताउन्मुख थिएन । मैले टुङ्ग्याउने हेतुले एउटा प्रश्न फालेँ, ‘कदाचित यो असंवैधानिक काम देउवाले गरेको भए तपाईंहरू यतिञ्जेलसम्म सहरका कति रेलिङहरू तोडिसक्नुहुने थियो ?’
सत्ताको मातले सामूहिक पागलपनको सिकार बनाएको छ कमरेडहरूलाई । उनीहरूको दिमागमा षड्यन्त्र सिद्धान्तबाहेक केही छैन । खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुखलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर, बालुवाटार दरबारको खोपीमा भुजा ज्युनार गराउँदा उनीहरूको लाज पचिसकेको छ । तैपनि अरुलाई देशद्रोही भन्न छाड्दैनन् ।
अरु त अरु संसदीय व्यवस्था फाल्न हिँडेका गृहमन्त्री बादल कमरेडसमेत आलोचकहरूलाई ‘प्रतिगामी’ भन्न बेर लाउँदैनन् । वीर अस्पतालका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा उठाएर मन्त्रालय झिकाउने बादलबाट ‘प्रतिगामी’ लाई लाठी र पानीको फोहरा कुन ठूलो कुरा भयो र ! राजनीति र अपराधबीचको सीमा मेटिएको बेलामा हामी छौँ ।
ओलीको पुसतन्त्रविरुद्ध सडकमा ओर्लिनेमा अरु त अरु भइगए, स्वयम् प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि छन् । तर, एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक लहर सुरु भएको छ देशमा । त्यसलाई अघिल्लो पंक्तिमा बसेर हाँक्न भने नयाँ पुस्ता आइसकेको छ । तिनलाई पेरिसडाँडाले के भन्छ, मतलब छैन ।
नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारनेर प्रदर्शन गर्दा व्यापक धरपकड गरिएको छ । जथाभावी लाठी प्रहार, पानीका फोहराबाट दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।
नागरिक आन्दोलनमा सहभागी प्राध्यापक, लेखक सञ्जीव उप्रेतीले शिलापत्रसँग कुरा गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारबाट कायरता प्रदर्शन भएको बताए । ‘हामीले लोकतान्त्रिक माग गरेका थियौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट,’ उनले भने, ‘तर कायर रहेछ सरकार, जो लाठी हान्दै पानीका फोहरा फाल्दै हामीकहाँ आयो ।’
अरु बेला शान्त संयम देखिने नारायण वाग्लेले पीपलको रुखनेर उभिँदै माइकबाट उद्घोष गरे, ‘अब साथीहरू, तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो ।’
नेपाली समाजले पत्याएका मध्ये यी दुई अगुवाले बोलेका वाक्य नागरिक प्रदर्शनको रेकर्डमा दर्ज हुनेछन् । पक्कै आशा गर्न सकिन्छ, यो आँधी यत्तिकै थामिनेवाला छैन ।
हुन त तिनै सल्लाहकारले फोनमा भनेका थिए, ‘ठीकै छ नि त, तपाईंहरू आफ्नो तयारी गर्नुहोस् । हामीलाई पनि थाहा छ, हुनेवाला के छ ।’
‘हुनेवाला के छ, तपाईंहरूलाई थाहा छ होला कमरेड’, मैले जवाफ फर्काएँ, ‘तर जे जसो भइरहेको छ, गलत भइरहेको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अघिल्लो साता यो पंक्तिकारसँग आफ्नो निवासमा सम्भावित परिदृश्यको आकलन गरेथे । ‘काठमाडौंभित्रको नेपालमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ, काठमाडौंबाहिरको नेपाल तपाईंहरूले सोचेजस्तो छैन,’ ज्ञवालीले भनेथे, ‘हेर्दाखेरि पार्टीको बहुमत उहाँहरू (माधव–प्रचण्ड) तिर देखिए पनि चुनावमा जाँदा बेग्लै स्थिति पक्का आउँछ ।’
ज्ञवालीको विश्लेषण र त्यसपछिको आकडा गलत नहुन सक्छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, लोकतन्त्रको तेस्रो लडाइँ घोषणा गर्नेहरूले कति धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । जनतामा विधिप्रतिको विश्वास होइन, व्यक्तिप्रतिको अनुराग बाँकी रहँदासम्म लडाइँ लामो रहिरहन्छ । अनि 'पपुलिस्ट डेमागग'ले पशुपतिनाथमा पूजा गरिदिएका भरमा, या परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई सरापेका भरमा मतपेटिका आफ्नो बनाउन सक्छ ।
द इकोनोमिस्ट म्यागजिनले केही वर्षअघि कभर स्टोरी बनाएको थियो : ह्वाट्स गन रङ विद् डेमोक्रेसी । लोकतन्त्रमा के गल्ती भयो ? यो कसबाट संकटमा छ ?
निष्कर्ष थियो : लोकतन्त्र आज विश्वभरि संकटमा छ । अरु कसैबाट हाेइन, निर्वाचित तानाशाहबाट ।
यो निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा कामयाब हुन सक्छ । हामीले अब यो विन्दुमा आएर स्वीकार्नुपर्छ, २०६२–६३ मा पूर्ण लोकतन्त्र आइसकेको रहेनछ । सायद हामीलाई उज्यालोको नाममा घामभ्रम भएजस्तो छ ।
सिर्जनशील अराजकतावादी कवि हाङयुग अज्ञातले आफ्नो कविता ‘नङ र निरंकुशता’ मा लेखेका थिए, ‘काट्छौँ, तर नङ फेरि आइबस्छ ।’ आज हाम्रो हालत हाङयुगको कविताजस्तै भएको छ । ‘च्या खानु भो ?’ टक शोमा नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले दुई दिनअघि भनेझैँ नेताहरूले १५ वर्षअघि नागरिक आन्दोलनका बेला गरेको क्षमायाचना, अनि नागरिक विश्वासको दुरुपयोग भएको छ ।
लोकतन्त्रको बाँकी लडाइँ लड्न भीमार्जुन आचार्यले विवेकशील साझा पार्टीको कार्यक्रममा औँल्याएका ‘विवेकशून्य लम्पट कार्यकर्ता’ होइन, स्वतन्त्र चेत भएका जागरुक नागरिक चाहिएको छ । तेस्रो जनआन्दोलन कुन विन्दुमा गएर टुङ्गिएला, हेर्न बाँकी छ । तर, त्यसको बहाव दलविशेषले होइन, अगुवा नागरिकबाट सुरु भएको छ । केही विवेकी अनुहारहरूको साहसबाट सुरु यो बहावलाई अब समुदायले आफ्नो मानेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।
तब मात्रै हाम्राे नागरिक सर्वाेच्चता कायम हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७, १८:१०:००